Tronsmart Deals ye10th Anniversary yeAliexpress | Gadget nhau
Tronsmart inobata yegumi yegumi yeAliexpress
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Vatauri, Gadgets, General
Mangwana ndizvo zuva rakakosha munyika yekutenga pamhepo. Aliexpress, inozivikanwa kwazvo pamhepo yekutenga chikuva kubva kuChina, inopemberera gore regumi regumi. Makumi emakore akazara ebasa, ayo sezvaasingakwanise kuita neimwe nzira, achapemberera pamwe nezvinoshamisa zvinopihwa. Tronsmart ajoina iyi mhemberero uye inotisvitsa isu kune matatu zvigadzirwa zvine ma discounts ausingazokwanise kupotsa.
Dai iwe wanga uchitsvaga iyo nguva yekuwana gadget inoenderana nemumhanzi Iwe haugone kupotsa chiitiko ichi. Tronsmart inotikokawo kuti tifare yegumi yegumi yeAliexpress uye inopa chaiko kupihwa kupihwa. Makore gumi kutengesa zvigadzirwa zvinoenda kure nzira. Kana iwe uchida kujoina pati tarisa zvirevo zvatinokuunzira.
1 Kupfuura 40% dhisikaundi pane zvigadzirwa zveTronsmart
1.2 Tronsmart T6 Uye
Kupfuura 40% dhisikaundi pane zvigadzirwa zveTronsmart
Kubva kuTronsmart vanotiratidza sarudzo nhatu dzakasiyana, zvese zvine chekuita nekurira nemumhanzi, kuitira kuti titore mukana weAliexpress gumi rekuzvarwa madhiri. Nguva shoma dzatinogona kuwana matinogona kutenga zvigadzirwa zvehunhu hwakaratidzwa pamitengo iyi isingadaviriki. Kana iwe uchitsvaga isina waya mahedhifoni kana bhuruu mutauri, usarasikirwa nemukana.
Vamwe TWS (Yechokwadi Wireless Ruzha) mahedhifoni ane yakanyatso nyatso dhizaini Ivo vanopa tekinoroji yazvino kutora iyo yekuteerera ruzivo kune inotevera nhanho. Kutenda ku Qualcomm chip zvave zvichigoneka kuwana iyo yemhando yepamusoro kurira pamwe nekukurumidza uye kwakasimba kubatana. Ivo vanoratidzira 13mm yakawedzera mutyairi zvirinani pane iyo 10mm AirPods.
Isu tinowana tekinoroji kubva Kuchenesa Ruzha yeiyo isinganzwisisike mimhanzi ruzivo pasina kwekunze kupindira yakachena zvakanyanya. Kutenda kune wakadzidza mashandiro esimba kuzvitonga kwayo, nekuda kwenyaya yayo yekuchaja, inotambanudza iwe Maawa makumi maviri nemana ekutamba. Zvizhinji zvekuzvimiririra zveaya mahedhifoni kuti tigare pamwe nesu zuva rese.
Verenga kubata zvekubata kuti tikwanise kudzora mimhanzi yekutamba pasina kutora smartphone yako muhomwe yako. Uyezve, tinogona kuzvishandisa takasunungukaZvese zvekuteerera kumimhanzi uye nekutaura pafoni mu "mono" fomati. Maonero atinoona imwe nzira chaiyo kune AirPods kuti nekuda kwegumi yegumi yeAliexpress isu tinokwanisa kuwana pa50% yemutengo wayo chijairira.
Raira yako Onyx Ace mahedhifoni pane mutengo paAliexpress pano
Tronsmart T6 Uye
Sarudzo yechipiri ndeye mutauri akasarudzikal, iyo Tronsmart T6 Uye. Mutauri anounza pamwechete maviri eakakosha maitiro atinowanzo tarisa mune gadget yerudzi urwu; simba uye diki saizi. Kubatanidza izvi ne hunyanzvi hwekumira dhizaini zvekuti mimhanzi inonzwika mumativi ese mhedzisiro yacho inonakidza.
Iyo Tronsmart T6 Plus maficha anosvika 40W simba. Pasina kupokana, rinopfuura simba rakakwana kuti unakirwe zvizere nemumhanzi waunofarira zvakanyanya chero mumba. Uye izvo munzvimbo dzakashama zvichavewo nezvakawanda zvekutaura. Mabass anonzwa kudzika chaizvo. Isuwo tine mukana wekuenzanisa kuitira kuti iko kubereka, maererano nemurume kana mukadzi, ndiyo yakanyanya kunaka.
Imwe yedzidziso idzo vashandisi vanofarira zvakanyanya ndeyekuti zvakare inoverengwa pamwe TWS michina. Kuti tinogona kuvabatanidza nemamwe maspika anoenderana yezwi rakanakisa redhiyo. Uye zvakare, pamwe neTronsmart T6 Plus zvakare unogona kumisa uye kushandisa izwi mubatsiri wako mudziyo. Mukurukuri anonyatsoshanda aunogona kutenga pane Aliexpress iine 43% dhisikaundi.
Pano unogona kutenga T6 Plus mutauri pane Aliexpress ine super dhisikaundi
Yakatangwa pakupera kwe2.019, mwedzi mishoma yapfuura takaita rombo rakanaka kuvaedza uye ita wongororo inonakidza kwazvo. Nemishumo yakanaka kwazvo kubva kuvashandisi vakasarudza kuitenga, Tronsmart's Spunky Beats vakawana mukurumbira wakanaka. Ivo vane iyo ichangoburwa Qualcomm chip yemusika iyo inopa yakadzikama yekubatanidza kumhanya uye mashandiro.
El Qualcomm aptX codec inoshandiswa neSpunky Beat, ipa mhando yemhando yakafanana neiyo yeCD. Chinhu chinogonesa mushandisi ruzivo runogutsa kwazvo. Vhoriyamu simba, kurira kwemhando yepamusoro, Kuchenesa Ruzha uye kuzvimiririra kwakanaka zvikonzero zvakakwana zvekuti vakufarire. Zvakare, nekuda kwegumi yegumi yeAliexpress unogona kuvabata neinoshamisa 70% dhisikaundi.
Pano iwe unogona kutenga iyo Spunky Beat paAliexpress mukusimudzira
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Tronsmart inobata yegumi yegumi yeAliexpress
Huawei P40 Pro - Unboxing uye yekutanga bvunzo
Iyi ndiyo Xiaomi Mi 10 Pro uye zvese zvigadzirwa zvitsva